postmarketOS, maitiro ekuiisa pane iyo PineTab nePlasma Mobile | Linux Vakapindwa muropa
pablinux | | Resources
Pachine nzira refu yekuenda kuti PineTab ive chaiyo sarudzo. Pane akati wandei zvinonakidza zvikumbiro, asi zvizhinji zviri kutarisa zvakanyanya pane nhare mbozha, senge iyo PinePhone iyo PINE64 inogadzirawo. Manjaro, inova iyo sisitimu inoshanda inosarudzwa nekambani yenanapple (paini), haitomboenda yakatwasuka muPlasma Mobile edition, chimwe chinhu chinoita zvakakwana postmarketOS.
Naizvozvi ini handireve kuti postmarketOS ndiyo yakakwana inoshanda sisitimu, zvirinani kune iyi piritsi. Masisitimu ese ane yavo yakanaka divi uye yavo yakaipa divi, uye kana isu tikaisa pamwechete zvese zvakanaka mune yega yega, zvingave zvakanaka: iyo Ubuntu Kubata desktop, zvimwe Plasma Mobile sarudzo uye kushanda kwakanaka kwe postmarketOS kana Arch Linux. Zvakaoma kufungidzira, asi ndinotenda kuti mune ramangwana zvese zvichave zvirinani. Plasma Mobile ine zvinhu zvandinoda, uye nzira yakanak yekuyedza iyo paPineTab ine postmarketOS.
1 postmarketOS inopa pre-yakavakwa mufananidzo uye inosimudza
1.1 Kuisa maitiro
postmarketOS inopa pre-yakavakwa mufananidzo uye inosimudza
Tisati tatanga, isu tinofanirwa kutaura kuti postmarketOS iri zvichibva paAlpine Linux, minimalist vhezheni yeLinux iyo yakanangana nekuchengetedza. Iyo package package iyo yainoshandisa ndeye APK (Alpine Linux package management), ine mirairo yaunogona kuona mu iri peji rewiki yako. Kunyangwe chinhu chakanyanya kukosha chiri, panogona kunge paine software shoma pane iri muDebian / Ubuntu kana Arch Linux / Manjaro repositories. Asi, tichifunga kuti isu tiri kutaura nezve piritsi, zvirokwazvo isu hatipotse chero chinhu.
Nezvataurwa pamusoro zvatsanangurwa, iyo matanho ekutevera kuisa postmarketOS paPineTab iri nyore kwazvo. Musiyano chete ndewekuti unowanikwa mushanduro mbiri, imwe iine inosimudza matinogadzirisa mashoma ma parameter uye mumwe mufananidzo wakavakirwa-mberi ndiko kuisa nekushandisa.
Ngatiendei ku yekuvandudza webhusaiti uye tinotora mufananidzo. Tinogona kusarudza iyo yekumisikidza kana iyo yakagara yakavakwa. Kune zvekare mavhezheni maviri, imwe yechiitiko chakagadzikana uye imwe yacho yekuvandudza zvimwe, izvo zvinofanirwa kuti zviite kuti zvisadzikame. Kubva pane zvandakaona mune akasiyana masystem anoshanda masisitimu ePineTab, chokwadi ndechekuti hapana mutsauko wakawanda, saka ini ndinokurudzira iyo yakagadziridzwa zvakanyanya iyo ichagadzirisawo mabugs nekukurumidza. ONA: ndiwo maonero angu kubva pane zvandakaona uye ndizvo zvandinofarira.
Isu tinosunungura iwo mufananidzo.
Isu tinovhura chero software kupenya iyo SD kadhi, senge Etcher, uye isu tinopisa mufananidzo kune microSD.
Isu tinotora kadhi kunze kwePC ndokuriisa muPineTab.
Isu tinobatidza PineTab. Kana isu tasarudza pre-yakavakwa mufananidzo isu tapedza. Kana isu tasarudza iyo yekumisikidza, isu tinoenderera, asi ona kuti mamwe matanho anotora nguva. Unofanira kutsungirira.
Pahwindo rekutambira, tinosarudza «Enderera».
Mune inotevera, isu tinosarudza kana isu tikaisa postmarketOS mune yemukati ndangariro (eMMc) kana mune yekunze imwe (SD kadhi).
Iye zvino tinofanirwa kuisa PIN-manhamba mashanu uye tinoisimbisa. Muvhidhiyo mune akachekwa nekuti ini ndanga ndashandisa imwe ye5.
Mune inotevera nhanho tinogona kumisikidza kana tichida kumisikidza SSH kana kwete. Kana tikasatomboishandisa, zvirinani kuimisa.
Tinogona kubva tonyora iyo data. Icho chinhu chandaizoita dai yaive yangu huru foni, asi kwete pahwendefa pandinenge ndisina data rakapfava kana ini handisi kubva pamba.
Chekupedzisira, isu tinomirira kwechinguva kuti kumisikidza kuti kupedze, uye chinguva kuti itange kekutanga.
Zvakanaka, ini ndaizopindura uyu mubvunzo nemumwe: zvine chekuita nezve chii? Kana isu tichida kushandisa Plasma paPineTab, ndinofunga kudaro nechikonzero chiri nyore chekuti isu tinogona kuishandisa tichitwasuka uye yakatwasuka. Zvakare, iwe unogona kuisa Kodi uye zvinoshanda, izvo zvasvika kuzondishamisa; Ino inguva yekutanga yekuiisa iyo paPINE64 piritsi uye kwete chete kuti inoisa, asi zvakare vhidhiyo inotaridzika kunge yakanaka. Kune rimwe divi, semuenzaniso, Firefox haibvise iyo keyboard uye hove dzengirozi haasati anditendera kuti ndione chero chinhu paYouTube.
Ini ndinofunga vanogadzira vari kutarisa zvakanyanya paPineTab yakazara, ndiko kuti, nekhibhodi inosanganisirwa. Ini handina icho nechikonzero chakareruka chekuti haisi muchiSpanish, uye dzimwe nguva ndinofanira kubatanidza imwe yandakatenga yeangu Android TV. Asi zvakanaka kuti uone izvozvo, zvishoma nezvishoma uye senge Kodi, zvinhu zvinotanga kushanda. Ndiri 90% ndakagutsikana izvozvo ramangwana remapiritsi rinoenda kuburikidza neLinux. Panguva iyoyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Maitiro ekuisa postmarketOS paPineTab uye shandisa Plasma Mobile yakatwasuka
Ini ndinayo nekhibhodi, uye iyo Manjaro KDE haina kundipa iro dambudziko rekusave yakatwasuka mushanduro yekupedzisira yandakaedza (kana mune yapfuura, uye kana mamwe matambudziko).
Ini ndakaisiya kubva muna Zvita ndakamirira vhezheni nyowani - chinhu chakaipisisa ndechekuti izvo zvekuvandudzwa hazvisi kufamba chaizvo, uye zvirinani kudzoreredza mufananidzo mutsva, parizvino zvaitika kune vese -.
Ndinovimba kuti sezvo Manjaro plasma yakasarudzwa kuti ive yepinephone, tichakurumidza kuve nepinetab vhezheni - nekuda kwechikonzero icho - kupfuura kukwikwidza kwayo, kusanganisira mufananidzo neLomiri, (ub ports) iyo ichave inoshanda uye inogona kuwedzera zvirongwa kubva kuManjaro repository.
Kunyangwe zvakadaro, zvinodikanwa kuti pakati pesimba rese reLinux ivo vanobheja pakurongedzwa kwebrowser, ingave Firefox, iyo isingatomboita, Chromium, Midori kana zvigadzirwa, kuitira kuti igone kunakidzwa zvirinani sekunge vaine Chrome OS .
Uye ngatimirirei shanduro neArvv8 WiFi6 (uye 5G pafoni) kuti ifambe zvakanaka.
Iwe wakangofanana neni, wakamirira kuvandudzwa. Ndiri kuona zvingangoita, asi zvinotora nguva kuti zvifambe zvakanaka. Zvamunotaura nezvebrowser zvakare ichokwadi, ese anoenda zvishoma.
Asi hei, kutsungirira.
Maitiro ekudzivirira Windows kubva pakushandura iyo nguva iwe paunoshandisa mbiri-bhuti